Messenger ကို Plus အားအခမဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများ Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူမှု Apps ကပ » အခမဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဗီဒီယို, Chat, Messenger ကို Plus အတွက်စာသား
အခမဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဗီဒီယို, Chat, Messenger ကို Plus အား APK ကိုများအတွက်စာသား
ultra မြန် App ကို & လုံခြုံရေး Lock ကို Messenger ကို Plus အားများအတွက် Facebook Messenger များအတွက်အစွန်းရောက်အလင်း App ဖြစ်ပါတယ် Built-in လုံခြုံရေးသော့ခတ်ကြီးမြတ်နှင့်အတူ။ Messenger ကိုပေါင်းရဲ့ Facebook, Twitter, Instagram ကို, LinkedIn တို့, Pinterest, Reddit ၏ပေါ့ပါးသောဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးသော့ခတ်နှင့်အတူတဦးတည်းတစ်ခုတည်း app ထဲမှာ Access ကိုသမျှသောဤလူမှုကွန်ယက်။ ဒီ app ကဒီက Facebook messenger ကိုက, Twitter, Instagram ကို, Reddit, Pinterest နှင့် LinkedIn တို့စတာတွေများအတွက်အစွန်းရောက် Lite App ဖြစ်ပါတယ် 2.5MB ထက်လျော့နည်းနှင့်အတူအစဉ်အဆက်ထက်ပိုမြန်တပ်ဆင်ပြီးMessenger ကို Plus အား၏အဓိက features တချို့ကိုများမှာ
★ Ultimate လုံခြုံရေး Lock ကို
2.5 လူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်အတူ 7MB ထက်★နည်း
★ရှာရန်သူငယ်ချင်းလူများ, စာမျက်နှာများနှင့် Facebook, Twitter Instagram ကိုအပေါ်အခြားအရာအားလုံး
★ 4G, 3G, 2G ဒေတာများနှင့် Wi-Fi နှင့်အတူအလုပ်လုပ်!
★သင့်ရဲ့ဘက်ထရီနဲ့ memory Save
Facebook မှာ Facebook က Messenger ကို, Instagram ကို, Twitter Reddit နဲ့ Pinterest နှစ်ဦးစလုံးမှ★အခမဲ့ပြီးပေါ့ပါးတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာ
Facebook နှင့် Twitter အဘို့အ★ video download ။
-Messenger ကို Plus အားများအတွက် ultra Lite ကို App ကို & လုံခြုံရေး Lock ကို- Facebook နှင့် Facebook တွင်တမန်ဘို့က Ultra အလင်း app ကိုလျော့နည်းဒေတာများကိုအသုံးပြုနှင့်သင့် privacy ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သင့်ရဲ့ facebook ကိုအထောက်အထားများသုံးပြီး login နဲ့သင်တဲ့စာဝှက်စနစ်ကိုနည်းပညာဖြင့်လုံခြုံကြသည်
ရတာဟာ app ကိုတစ်ခုဖယ်ရှားရာမှာတမန်ရှိပါတယ်, သငျသညျ, သင့်ရဲ့ Facebook မိတ်ဆွေများမက်ဆေ့ခ်ျကိုမခေါ်နိုင်ပါ။ လိုအပ်2သီးခြား apps များမရှိပါ!
-Free Facebook က Lite ကို, စသည်တို့က Facebook messenger ကိုသငျသညျအီမိုတီကွန်ကိုပို့, သင့်ရဲ့ Facebook သူငယ်ချင်းများနှင့် chat ခွင့်ပြုထားတဲ့ Lite, ဗီဒီယိုများ, ပုံများ, ဆုကြေးဇူးကို, သတင်း feed ကို browse, မှတ်ချက်များများအတွက်ပေါ့ပါးအခြားရွေးချယ်စရာ ..
-Minimalistic ဒီဇိုင်းနှင့်သင့်ဘက်ထရီနှင့် RAM ကိုကယ်ဖို့လျော့နည်းမိုဘိုင်းဒေတာများကိုအသုံးပြု
- android ဖုန်းအပေါငျးတို့သဗားရှင်းတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့။ မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ရုပ်ပြောင်ရဲ့ပေးပို့ chat ရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးကီးဘုတ်သုံးပါ
Facebook မှာ app တွေအဘို့ကို Facebook သည် -Intergrated news feed, ချက်တင် (တမန်) ... အားလုံးတဦးတည်း Messenger ကိုပါ။
ultra အလင်း app ကို။ သင့်ရဲ့ဖုန်းမှတ်ဉာဏ်ကယ်တင်
သင့်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ဒီ messenger ကိုလိုလားတဲ့ App ကိုမှလုံခြုံရေးအပိုအလွှာ Added
Facebook က, Messenger ကို, Twitter နဲ့တခြားလူမှုမီဒီယာကိုဖြတ်ပြီးရှာရန်
အလွယ်တကူက Facebook ဗီဒီယိုများကို download လုပ်ပါ
ဒီ app ကိုမှသီးသန့်တည်ရှိမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အဆငျ့ Enhanced
အခမဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဗီဒီယို, Chat, Messenger ကို Plus အတွက်စာသား
Messenger ကို: အခမဲ့ဗီဒီယိုများ, စာသား, မက်ဆေ့ခ်ျ